विद्यार्थी फकाउने यस्तो पो तरिका ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कुवेतमा डेबिट शेर्पाको जन्मोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न (फोटो फिचरसहित)
Rockets hit Kuwait’s embassy in Baghdad →
विद्यार्थी फकाउने यस्तो पो तरिका !
सिन्धुपाल्चोक, २९ असार- राजधानीका नाम चलेका उच्च मावि विद्यार्थी खोज्दै गाउँ आउन थालेका छन्। यसका लागि उनीहरुले एसएलसीमा सफल विद्यार्थीलाई बधाइज्ञापन तथा सम्मान गर्न विभिन्न विद्यालय र संघसंस्थाद्धारा आयोजित कार्यक्रमलाई उपर्यूक्त थलो बनाएका छन्।
एमाले विद्यार्थी संगठन अखिलद्धारा मंगलबार जिल्ला उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न सदरमुकाम चौतारामा आयोजित कार्यक्रम यस्तै थलो बन्यो। कार्यक्रम हुने सुइको पाएपछि राजधानीका तीन उच्च माविका संस्थापक, सञ्चालक र प्रधानाध्यापक हात-हातमा आकर्षक ब्रोसर र तुल ब्यानर लिएर आइपुगे। छात्रछात्रालाई वधाइज्ञापन गर्ने दल र विद्यार्थी नेताको लाइनमा उभिएर उनीहरुले विद्यार्थीलाई आ-आफ्ना कलेजका ‘फूलबुट्टे’ विषेशता मात्र सुनाएनन् एक-एक गरी नमस्कारको आदरमा ब्रोसर समेत बाँडे।
‘एक पटक कलेजै आएर भिजिट गर्नु न। त्यसपछि बसेर कुरा गरौंला,’ उनीहरुले प्रत्येक विद्यार्थीसँग कानेखुशी गर्दै भने। कार्यक्रममा माइनस्टोन इन्टरनेशलन कलेज, अरुणिमा कलेज र पुष्पलाल मेमोरियल कलेजले होडबाजी गर्दै विद्यार्थी फकाएको दृश्य रमाइलै देखिन्थ्यो। कार्यक्रमस्थल जिविस सभाहल बिहानैदेखि ती कलेजका रंगीविरंगी तुल र व्यानरले सजिएका थिए।
आयोजकसँग समय मागेर कलेज प्रतिनिधिले अतिथिको आशण ग्रहण मात्र गरेनन् पालैपालो भाषण समेत गर्न भ्याए। उनीहरुले जहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणासमेत गरे। ‘व्यवस्थापन, विज्ञान र मानविकी शंकायमा अध्यापन गराउँदै आएको हाम्रो कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा दिंदै आएको छ। तपाईहरुलाई कलेजमा स्वागत छ,’ माइलस्टोनका सञ्चालक सुकदेव सिग्देलले विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। पुष्पलालका प्रशासन प्रमुख सीपी आचार्यले ‘एकेडेमिक म्यानेजमेन्ट’ द्धारा सञ्चालित आफ्नो कलेज ‘उत्कृष्ट’ रहेको विद्यार्थी माझ दाबी गरे।
सिन्धु अखिलसँग ‘एकेडेमिक सेतु’ गाँस्न आफू यहाँसम्म आइपुगेको बेलीविस्तार लगाउँदै उनले भने, ‘जेहेन्दार र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ।’ उनले आफ्नो कलेजमा सिन्धुका उत्कृष्ट विद्यार्थी भित्र्याउन अखिल-कलेजबीच सम्झौता भएको खुलासा गर्न समेत भ्याए। अर्को कलेज अरुणिमाका संस्थापक भिमानन्द ढुंगानाले गैरनाफामुलक ढंगबाट चलेको आफ्नो संस्थाले सुलभ र स्तरीय शिक्षा दिइरहेको बताए।
कार्यक्रममा विशिष्ट श्रेणी ल्याउने ४३ र प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण झण्डै डेढ हजार विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो। अखिलले परम्परागत रुपमा वर्षेनी यो कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हातमा रहेको ब्रोसर अध्ययन गर्न व्यस्त विद्यार्थी ती कलेजको घोषणा र अफर सुनेर वाल्ल परे। ‘कमर्श पढ्ने सोच बनाएकी थिएँ। कहाँ पढ्ने कुन कलेज पढ्ने यो कार्यक्रमले त झन कन्फ्यूज पो बनायो,’ आनन्द उच्च मावि जलवीरेबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण छात्रा सजिना थापाले भनिन्, ‘थप बुझ्नै पर्ने भो।’ कलेजले आग्रह गरेकाले विद्यार्थीले समेत थप बुझ्ने मौका पाउने सोचेर मञ्च दिएको आयोजकले बताए।